တွေးချင်သလိုသာ တွေးပြီး မှတ်ချက်ကလေးတွေ ရေးသွားကြပါတော့…။
Posted by သက်ဝေ at 11:28 PM
Labels: Thoughts, ဓါတ်ပုံ
myatnoe August 8, 2008 at 11:44 AM
သူများတွေ တွေးပီးမှ ရေးမယ်..ဟဲဟဲ
khin oo may August 9, 2008 at 1:04 AM
၁။ ဒါသက်ဝေရဲ. သားသားလေးဖြစ်ရမယ်။
၂။ သူငယ်ချင်းရဲ. ပစည်းလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
၄။ ကိုယ်ပိုင် ခလေးလေး လိုချင်လိုက်တာနော်.။
Yu Wa Yi August 10, 2008 at 12:26 AM
ဒို့ ကလေးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံကို ကြည့်ပြီး ဒို့ ငိုနေခဲ့ရတုန်းက အတန်းဖေါ်နိုင်ငံခြားသား
တွေနောက်တာပြန်သတိရမိတယ်။ “အဲဒီကလေးက နင်နဲ့ တူတာလား၊ နင့်အမျိုးသားနဲ့ တူတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် နင့်အိမ်နီးနားချင်းနဲ့ တူတာလား” တဲ့ကွာ။
layma August 12, 2008 at 12:43 AM
လင်း August 12, 2008 at 2:26 PM
nu-san August 13, 2008 at 10:31 AM
ဒီကလေးလေးပုံကြည့်ပြီး ဘာပြောရမှန်းမသိလို့ ဘာမှ ရေးမသွားရတာ သက်ဝေရဲ့.. :D မျက်နှာလေးက ပြောင်စပ်စပ်လေး သူပဲနေတတ်တယ်..:)
တန်ခူး August 13, 2008 at 4:32 PM
တဦးတည်းသောသားလေးများလား… ပန်းချီထဲက အဖော်လေးတွေကိုပါ ခင်တွယ်နေပုံထောက်ရင်…
diLo August 16, 2008 at 11:44 PM
:d thats the nature of beingachild! innonce and.."brave"..they do not feel embarassed..or hold back their thoughts! they are more expressive and open about their thoughts and feelings!
သက်ဝေ August 21, 2008 at 12:48 PM
လူလည်လေး မြတ်နိုး၊ ကိုယ်ပိုင်လေး လိုချင်တဲ့ မမခင်ဦး၊ ကလေးတွေကို လွမ်းပြီး ငိုနေလို့အနောက်ခံခဲ့ရတဲ့ မယုဝရီ၊ ဘာပြောရမှန်း မသိတဲ့ နုစံ၊ အတွေးတွေ တွေးသွားပေးတဲ့ လေးမ၊ လင်း၊ တန်ခူး နဲ့Dilo တို့ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၁။ သက်ဝေရဲ့ သားလေး မဟုတ်ရပါ။
၂။ သူငယ်ချင်းရဲ့ပစ္စည်းလေးလဲ မဟုတ်ပါ။
၃။ ၈ ရက် ၈လ ၂၀၀၈ နေ့ က အင်တာနက်ပေါ်က ရလာတဲ့ ဓါတ်ပုံ လေးပါ။
ရဲရဲတောက်တဲ့ သွေးတွေ စည်းလုံးညီညွတ်ဖို့ ၊
ရှေ့ ဆက်ပြီး တွဲလက်တွေ ညီညာကြစေဖို့ အတွက် ၈၈၈၈ အမှတ်တရ အနေနဲ့တင်ထားတာပါ။
myatnoe August 21, 2008 at 3:16 PM
အဖြေလာတောင်းတာ .. အဖြေရသွားပီမို့
မြတ်နိုးအဖြေကတော့ အမသက်ဝေရဲ့ အဖြေနဲ့ တထပ်တည်းကျသွားတယ်ဆိုတာတော့ ပြောပြတော့ဘူးနော်..ဟီး
hmoo March 29, 2009 at 3:18 AM
Mom should B big :)
တနေ့ တာ ဒိုင်ယာရီ